Indawo yokudlela yase-Dinnerware Isitolo esidayisa yonke impahla | 28 Izithako zeCeramic
Dla NoHosen Two Eight, Dlala Nomhlaba
I-Fine China Dinnerwar
Yonke imininingwane ingumbono ohlukile, umhlaba ohlukile kuma-Hosen Plates akhiqizwa ngamasu okukhiqiza wesimanje.
Ukudla kungenye yezinto ezithokozisayo eziletha abapheki nabantu ndawonye. Siyathanda ukubona ukuthi amapuleti nezitsha ze-SPOT ezivela ku-Hosen Two Eight Color Collection zibonisa lo moya ofudumele futhi zimatanisa isifiso sokuvelela sabapheki.
UKUQOKELELWA KWE-TEXTURE - 2021 Idizayini Entsha Ye-Porcelain Dinnerware Yezinga Lokushisa Ephakeme Isetha Idizayini Eyingqayizivele Amasethi E-Ceramic Ehhotela Lendawo yokudlela
I-tableware eyingqayizivele enombala obomvu noluhlaza, enobuso obucwebezelayo obucwebezelayo, obunemiklamo ehlukene, ingase isetshenziselwe ukuhlobisa kahle kumatafula akho okudlela ngokudla. Futhi ukwanelisa ukucabanga kwabapheki abahlukene.
I-COPPER BLUE - Isitayela Se-Morden I-Gradient Gre en Glossy Porcelain Indawo yokudlela yase-Dinnerware Isethi Isitolo esidayisa yonke impahla Ngokwezifiso
I-reactive color glaze i-sopt ekhanyayo yaleli qoqo. Kusuka kulesi sitsha sesidlo sakusihlwa sendawo yokudlela, izimo ezihlukene nosayizi abahlukahlukene ngokukhethwa kwakho.Kuyatholakala kumshini wokuwasha izitsha kanye ne-microwave kanye nokungaklwebheki.
I-LOTUS BLUE - 2021 Amasethi e-Tableware yoMkhiqizo Omusha OyiBlue Porcelain, Indawo yokudlela Ecwebezelayo I-Dinnerware Ceramic With Custom
Enye ye-ceramic dinnerware entsha neyingqayizivele eluhlaza okwesibhakabhaka, ayigcini nje ngombala wesibhakabhaka oluhlaza, kodwa futhi ihlangana nolwandle oluluhlaza okwesibhakabhaka olucacile. Ngomphumela obonakalayo, yenza ukudla kwakho kube mnandi futhi kubukeke kahle.
GREEN JUNGLE - Isitayela Se-Rustic Esidumile Amasethi E-Green Enamel Ceramic Dinnerware, Amasethi E-Porcelain Ebanga AB Indawo yokudlela
Amapuleti erestshurenti amasha aluhlaza. I-dinnerware kasayizi omkhulu ehlukile, etholakala endaweni yokudlela yasemakethe yaseNingizimu-mpumalanga ye-Asia. Ziqinile futhi ziphephile kumshini wokugeza izitsha kanye ne-microwave.
Uma udinga noma yikuphi ukwenza ngokwezifiso kombono wakho we-teableware, vumela insizakalo yokwenza ngokwezifiso ka-Hosen yenze lo mbono ufezeke.
1. Umbuzo: Ikhasimende linikeza isithombe noma umdwebo isithombe mayelana nombono nge-deatil ecacisiwe, ubukhulu, impahla kanye nemfuneko yokuhambisana.
2. Idizayini: Ithimba ledizayini lidweba isithombe se-3D ukuze uqinisekise mayelana nomklamo, bese lisebenza ngamasampula. Ithimba elihilelekile kusukela ekuqaleni kwephrojekthi ukuze liqinisekise imikhiqizo engcono kakhulu eklanywe ngokwezifiso ukuze ifanele izidingo zamakhasimende.
4. Ukuphathwa Kwekhwalithi: Ukuze sinikeze izakhiwo zekhwalithi ephezulu, sigcina umphumela& Uhlelo Lokuphathwa Kwekhwalithi olusebenzayo.
Umgomo wethu uwukwanelisa amakhasimende ethu ngokunemba okuphezulu kanye nekhwalithi ethembekile ukuze siqinisekise ukuthi wonke amakhasimende angazizwa ekhululekile futhi eqiniseka ngemikhiqizo yethu ku-tableware yawo. Imikhiqizo ye-Hosen Two Eight Ceramics ithola kakhulu ukusetshenziswa kwayo emakethe ngenxa yezakhiwo ezinhle.HOTEL, RESTAURANT, WEEDING, EVENT, SUPER MARKET.
I-White Tableware Collection ihlangabezana nemfuneko yengxenye ngayinye yehhotela, njenge-Lobby, I-Buffet, Indawo yokudlela ekhethekile, I-Main Dinning, Indawo yokuphuzela utshwala...Xhumana ukuze uthole imininingwane eyengeziwe
ISIXAZULULO SOKUQASHISWA KOMSHADO
Ipuleti leshaja elinegolide elicwebezelayo, elisiliva lingahlangabezana nombuzo wekhasimende Lokuqasha elidinga lo mbukiso wezinto zetafula zikanokusho emcimbini. Ipuleti Leshaja yengilazi nalo lihlangabezana nalesi sicelo esikhethekile.
Iqoqo le-Colour Tableware lihlangabezana nomqondo ohlukile wendawo yokudlela, UKUQOQWA KOMLILO, UKUQOQWA KWASEDOLOBHENI, UKUQOQWA KWEZINKUNGU...Chofoza ukuze uthole ikesi lendawo yokudlela eyengeziwe ukuze ulihlole
I-SUPER MARKET DINNERWARE ISETHI
I-Hosen Two Eight Ceramics ihlinzeka nge-dinnerware kuphakheji elisethiwe, ikakhulukazi ama-pcs angu-18 isethi ngayinye, ama-24pcs isethi ngayinye. Ipakishe kuphakheji ephephile futhi uqinisekise ukuphepha kwezimpahla ngesikhathi sokuthutha noma ukuthengiswa ku-inthanethi.
I-Hosen Two Eight Ceramics njengomkhiqizi we-tableware kusukela ngo-1998
Ngendawo yokukhiqiza engamamitha-skwele angama-30,000, inkampani inikezwe amakhono amahle kakhulu okwenza, ithimba lochwepheshe, amandla okukhiqiza aphezulu, ukuphathwa kwesimanje okuqinile. Ngokuhlanganiswa kobuciko bendabuko nobuchwepheshe besimanje, amaCeramics amabili ayisishiyagalombili abambelela kunqubomgomo yokudala imikhiqizo emisha nokuphishekela isitayela sobuciko; sihlinzeka ngemikhiqizo emihle ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ahlukene.
UMA UNEMIBUZO EMININGI, SIBHALE
Vele usitshele imfuneko yakho, singenza okungaphezu kwalokho ongakwenza.
Xhumana Nokuthengisa ku-JANE LEE